Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqdiga ah ee Lacagta Nadiifka ah ee loogu talagalay Xusuusta
Waxaan nahay soo saare khibrad leh. Ka guuleysiga aqlabiyadda shahaadooyinka muhiimka ah ee suuqgeeda Jumlada OEM / ODM China Hot Sale Sports Running Basketball Soccer Xuska Koobka Biladaha Trophy, Iyada oo adeeg heer sare ah iyo tayo leh, iyo ganacsi ganacsi shisheeye oo muujinaya ansaxnimo iyo tartan, taas oo lagu kalsoonaan doono lana soo dhaweyn doono macaamiisheeda waxayna u abuureysaa farxad shaqaalaheeda.
Billadaha Isboortiga OEM / ODM Shiinaha Isboortiga iyo qiimaha Billadaha, Waxaan leenahay wax ka badan 8 sano oo waayo-aragnimo ah ee warshaddan oo waxaan ku leenahay sumcad wanaagsan goobtan. Xalalkayagu waxay ku guuleysteen ammaanta macaamiisha adduunka oo dhan. Ujeedkeenu waa inaan ka caawinno macaamiisha inay xaqiijiyaan hadafyadooda. Waxaan wadnay dadaallo badan si aan u gaarno xaaladdan guul-u-guuleysiga waxaana si kal iyo laab ah idiinku soo dhaweyneynaa inaad naga soo biirtaan
Hore: Zinc Alloy Die Casting Antique Silver Xusuus Qadaadiic 3D Design
Xiga: Naqshadeynta Custom Custom Bilad 2D 3D Bilad
Silsilad Brooch Lapel Pin
Dhaldhalaalka Brooch biinanka
Soosaarayaasha dhaldhalaalka dhaldhalaalka
Ragga Lapel Pin